२५०० नाघेको नेप्से ‘करेक्सन’ भएर बन्द
काठमाडौं । साताको चौथो कारोबार दिन सेयरबजार परिसूचक नेप्सेमा सामान्य करेक्सन भएको छ । सुरुवाती समयबाटै तीव्र उतार–चढाव देखिएको बजारमा करेक्सन देखिए पनि करिब साढे नौ अर्बको कारोबार भएको छ । आज नेप्से ६.८१ अंकले...
स्ट्यान्डअप कमेडीमा महिला सहभागिताको खडेरी ?
काठमाडौं । हाम्रो घरदेखि हस्पिटल जाने बाटोमा एक वर्षदेखि खनेको थियो । सबै जनता चिन्तित भए पछि मिडिया पुग्यो मेयरकोमा । मिडियाले सोध्यो– तपाईंले यहाँको बजेट कहाँ लैजानुभयो । जवाफमा मेयरले भने– मैले यति...
संवैधानिक इजलासमा पनि आमहड्तालको चर्चा !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहले बिहीबार आमहड्ताल आह्वान गरेको छ । आमहड्तालको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा बहस जारी रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पनि...
पार्टी छोडेर माधव नेपाल ‘पाटी’मा गएपछि काम गर्न सुरु भयो : ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालका कारण लामो समय भूमि व्यवस्था र सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न नपाएको जिकिर गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित भूमिहीन सुकुम्बासीको कार्यक्रममा उनले...
हिमानी ट्रष्टद्वारा विद्यार्थीलाई ज्याकेट र स्लिपिङ ब्याग
हेटौंडा । सामाजिक कार्यमा सक्रिय हिमानी ट्रष्टले हेटौंडा–१६ को एक विद्यालयका विद्यार्थीलाई ज्याकेट र स्लिपिङ ब्याग प्रदान गरेको छ । हटियामा रहेको त्रिभुवन माविका नर्सरीदेखि कक्षा–३ सम्म अध्ययनरत् विद्यार्थीलाई ट्रष्टले जाडोका लागि ज्याकेट र स्लिपिङ ब्याग...
हङकङमा तयार भयो ‘औँठी बैना’
काठमाडौं : लोकप्रिय गायक दीपक लिम्बू र मेलिना राईको स्वर रहेको गीत ‘औँठी बैना’को भिडियो हङकङबाट सार्वजनिक गरिएको छ । विष्णु इङ्नामको शब्द शृजना रहेको गीतको भिडियो लोक शैलीमा तयार पारिएको छ । जसमा...
किशोरले बनाए ‘हाम्री झ्याउँकिरी’
काठमाडौँ । कमेडी श्रृङ्खला निर्माण गर्दै आएका किशोर भण्डारी ‘डिट्ठा साब’ ले सामाजिक विषयमा ‘हाम्री झ्याउँकिरी’ नामक टेलिश्रृङ्खला श्रृङ्खला निर्माण गरेका छन् । प्रेमकथामा आधारित सामाजिक विषयवस्तु समेटिएको टेलिश्रृङ्खला भण्डारीले नै निर्देशन गरेका हुन्...
माइक्रोलिंक मिडिया ग्रुप प्रालि द्वारा संचालित
ठेगाना : दाङ ,लमाही ,नेपाल
फोन : 9847879773
इमेल : microlinkmoviemedia@gmail.com
प्रकाशन = माइक्रोलिंक मिडिया ग्रुप प्रा.लि
प्रबन्ध निर्देशक/अध्यक्ष : भोज राज थापा
प्रधान सम्पादक : भोज राज थापा
© 2021 Nepal Vitra All right reserved Site By : Himal Creation